Train Travel Germany Archives | စာမျက်နှာ9၏9| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပနေ့ချင်းညချင်းအိပ်ပျော်ရထားတစ်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုခုဖြစ်လာကြပြီဖြစ်သော်လည်း (အကြှနျုပျတို့သညျမှာရှာကြသည်ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း!), ရထားချစ်သူများနေဆဲတက်ပေးခြင်းမရှိပါ! အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်ရထားချစ်သူများများအတွက်, ဘာမျှမညဥ့်ရထားတစ်စီးဖွယ်ရှိနေသည်နှင့်မပါဘဲရှည်လျားသောအကွာအဝေး၏ဂုဏ်အသရေခံစား beats…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အထိအခမဲ့ရထားရှိလိမ့်မည် 30,000 ဆယ်ကျော်သက်ဒီနွေရာသီမှာ. အခမဲ့လက်မှတ်တွေအရေအတွက်ပင်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်. တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ. အီးယူဒါ့အပြင်ကြောင့်အသက်ဆယ်ကျော်သက်ဖို့ကမျးလှမျးခကျြမရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် 18 နှင့်အငယ်. ကြောင့်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပခရီးစဉ်များတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ရထားများတွင်ယူရို ၁၀၀ ဘီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် EU ကအဆိုပြုထားသည်, ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်. စုပေါင်း., စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု€ 4.5 ဘီလီယံကိုကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥရောပ Facility ချိတ်ဆက်ခြင်းဟုခေါ်သောရန်ပုံငွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတဆင့်လာကြလိမ့်မည်. တွင်…